sexy night တဲ့လား ……..? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » sexy night တဲ့လား ……..?
sexy night တဲ့လား ……..?
Posted by chatsu on Jan 13, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
လက်ကမ်း ရတဲ့ ကြေ ငြာလေး တစ်ခု ပါ မန်း လေး က SWAN HOTEL နဲ့HILL Resort HOTEL တို့ မှာ ယခင် က မြန်မာ့ ယဉ်ကျေး မှု့ နဲ့ဆန့် ကျင်တယ်ဆို ပြီး Night Club တွေပိတ် ပြီးနောက်မှ ယခုကဲ့ သို့ တရားဝင် လို လို တရား မ၀င်လို လို ပါတီ ပွဲ တွေ ရှိ နေ ဆဲ ပါပဲ
အင်း နိုင်ငံတော် ရဲ့ကောင်းတဲ့ ဘက် တို တိုးတက်မှု့နှုန်း က အနှုတ် ဖက် ကနေ အပေါင်း ကို ခု မှ စတင်နေတဲ့ အချိန် မှာ နိူင်ငံ တကာ နဲ့ရင်ဘောင်တန်း နိူင်တဲ့ဒါ မျိုးအဖြစ်တွေ ကတော့ ရှိ နေ ခဲ့ ပါပြီ ဒါပေ့မယ့်သူတို့ ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး အကြို ည ကတော့ ပျော် ရွှင်စရာ တွေ ပြည့် ပါစေ လို့ကျွန်ုပ်ချက်စူ စုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ………………..
တကယ့်ပွဲက မှတ်တမ်းလေးများ လိုချင်မိပါသေးတယ်ဗျာ …
လိုချင်တယ်ဆို နောက်မကျ သေးဘူး ဆရာ မနက်ဖြန် မှ ပွဲ က စ မှာ ဗျ
ကျုံတောင့်ကျုံခဲ မန်းလေးရောက်တုန်း ဆက်ဆီနှိုက်လိုက်အုံးမှပဲ ဟဲဟဲဟဲ….
တရားစခန်းဝင်နေတယ်နော် …. ပြန်ထွက်လာရင် ပြောလိုက်ရမလား ………….
ဟီးဟီး အရကား ချတာပါ ဂျာ ဟာဂျာ မကြီးကလဲ ဂျာ ဟီးဟီး
နောက်ဆို နိုင်ငံခြားသားအဝင်များရင် sex party တွေလာတော့မယ်။ အယင်ကလည်း လူခြေတိတ်ရပ်ကွက် ခြံကျယ်တွေမှာ လုပ်တယ်ကြားတယ်။ ရဲဖမ်းလို့မိတဲ့ ကောင်မလေးတွေ တွေ့ဖူးတယ်၊ သူတို့ကို အေပိုးစစ်ဖို့ ချုပ်ထားပြီး နောက်မှ ထောင်ထဲပို့တယ်။ (စီမံချက်လည်းမဟုတ်၊ အကပ်လည်းမရှိရင်ပေါ့လေ)။
သူတို့ တွေ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ခြံကျယ်ကြီးထဲမှာ ခဏခဏလုပ်တယ် ကြားတယ်..
Celebrity တွေတောင် ပါသေးဆိုဘဲ..မောင်ပေပြောတာ..သများပြောတာဟုတ်ဘူး..
ပြတဲ့လူရှိမှတော့ ကြည့်ကြ..နိုက်ကြပါကွယ်ရို့ …..
အဲ့သည်ဇာတ်ပွဲထဲက ကောင်မတွေက ဗွက်ထနေကုန်ပြီ
ပါတီပွဲထဲက ပုံတချို့ ပါရင် ဒီဂရီသာတိုးဖို့ ပြင်ရတော့မယ်ကွယ်
အင်း လက်ကမ်းစာစောင်လေးအတိုင်းဆိုရင်တော့ ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ လူငယ်တွေအတွက်ပြောပါတယ် အဲလို လက်ကမ်းစာစောင်ကို လိုက်ဝေတယ်ဆိုတော့ တစ်မျိုးပဲ
အဲဒီပါတီပွဲ ကို မကျေနပ်ဘူး
ငါရို့ မအားတဲ့နေ့ မှ လုပ်ရတယ်လို့ ..
နို့ ..အားလို့ ကတော့ မန်းတလေး ကိုပေါက် နဲ့ အတူ သွား ဒန့် စ် ပစ်လိုက်ချင်ပါရဲ့ 
ရန်ကုန်မှာကော မလုပ်ကြ အဲ..မကြေငြာ ကြဘူးလားဟင်…..အိအိအိအိ…ဟင်းးးးးးးးးး
အကြောင်းအရာ။ ညက ကိုယ်တွေ့အချက်အလက်များ အမြန်တင်ပေးစေလိုပါသည်
လူကြီးမင်း၏ ညက တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အချက်အလက်များကို အမြန်တင်ပို့စေချင်ပါတယ်. ဦးပေါက်၏ လက်ရာများဖြစ်ပါက ပိုကောင်းမည်ထင်ပါသည်။
နှာဘူး (လက်ထောက် စည်းရုံးရေးမှူး)